Man U, Man City Chelsea oo laga badiyey, Arsenal oo badiesay & Tottenham oo… – SBC
Man U, Man City Chelsea oo laga badiyey, Arsenal oo badiesay & Tottenham oo…
Posted by editor on January 1, 2012 Comments
Kulamo ka tirsan horyaalka Premier League-ga gaar ahaan wareegii 19-aad ayaa la ciyaaray sabtidii iyo axadii iyadoo inta badan kooxaha waa weyn dhulka lala galay sida Man City, Man U iyo Chelsea, halka Tottenham barbardhac lagu qabtey.
Manchester City oo guuldaro ku soo dhaweysay sanadka cusub ee 2012
Weeraryahanka South Korea Ji Dong-won ayaa siiyey fursad dahabi kooxdiisa Sunderland oo ku marti galisay garoonkeeda Stadium Light kooxda Manchester City oo hogaanka ku haysa farqi dhanka goolasha ah.
Kulan adag oo ay labada kooxood galabta yeesheen waxay Man City ku haminaysay inay ka faa’ideysato fursadii ay shaley iska dayacdey Manchester United oo gurigeeda lagu ciqaabay.
Inkastoo Sunderland si aad ah kulankan isku adkeysay una muuqatey inay difaac ka galayso kooxda boorsooyinka lacagta jiidaysa ee Man City, hadana waxay heleysay fursado door ah oo aanay ka faa’ideysan qaybtii hore ee ciyaarta sida iyadoo weeraryahanka reer Denmark ee ka tirsan kooxda Arsenal amaahdana kula jooga Sunderland uu iska khasaariyey fursad dahabi ah oo uu helay daqiiqadihii ugu horeeyey ee ciyaarta.
Sidoo kale xidiga khadka dhexe ee ka soo jeeda wadanka Benin ee qaarada Afrika Stephane Sessegnon ayaa isaguna dhankiisa fursad dahabi isdhaafiyey.
Tababaraha cusub ee Sunderland Martin O’Neill wuxuu ku soo tala galay shax difaaceed isagoo doonayey in uu weerarada Man City kubada kula qaybsado hab is difaac ah isla markaana uu raadsado weerar celis (Counter Attack).
Tababaraha cusub ee Sunderland Martin O’Neill wuxuu ku soo tala galay shax difaaceed isagoo doonayey in uu weerarada Man City kubada kula qabsado hab is difaac ah isla markaana uu raadsado weerar celis (Counter Attack).
Shaxda uu maanta ku ciyaaray Martin O’Neill waxay aheyd shax uu ka xadey tababaraha West Bromwich Roy Hodgson oo isagu kulankii hore ee Man City la ciyaartey WBA ka galey difaac 90-kii daqiiqo isla markaana dhibic muhiim ah ka qaatey, waana taasi mida uu maanta ku dhaqaaqay O’Neill oo muujiyey khidad ay ku dheehan tahay isdifaac hadana fursad raadso.
O’Neill waa kulankiisii shanaad intii uu ahaa tababaraha Sunderland oo loo magacaabay bishii December horaanteedii waxaana shantaasi kulan oo lagu kala qaadanayey 15 dhibcood uu qaatey 10 dhibcood taasi oo ah sadex guul iyo hal barbar dhac.
Guuldarada Man City ay kala kulantey oo ah tii labaad waxay sidoo kale ka dhigan tahay in aanay ku guuleysan kulamada ay martida tahay tan iyo 5-tii bishii November oo ay 2-3 kaga badisay QPR oo ay marti u aheyd.
Kulankana waa kii labaad oo aanay wax gool ah dhalin tan iyo bishii April ee sanadkii 2010 iyadoo wixii intaasi ka dambeeyey dhamaan kulamada Premier league-ga oo dhan ay goolal dhalinaysay.
Sunderland waxay guushan u soo qaadey kaalinta 13-aad iyadoo ka soo ruqaansatey kaalinta 17-aad oo ay ku jirtey.
Ji Dong-Won (Daqiiqadii 90+3)
Garoonka Stadium Light ee kooxda Sunderland oo lagu ciyaarayey waxaa ka soo qayb galay kulanka daawadayaal gaaraya 40,625 oo qof.
Sir Alex Ferguson oo guuldaro ugu dabaaldegay sanadguuradiisii 70-aad
Macalinka kooxda Manchester United Sir Alex Ferguson ayaa xaley ugu dabaaldegay guuldaro bahdil ah oo kooxdiisa loogu geystey gurigeeda Old Trafford sanadguuradiisii 70-aad ka dib markii 2-3 ay kaga badisay kooxda jahwareersan ee ku jirta booska Sera B-da ee Blackburn.
Weeraryahanka reer Nayjeeriya Ayegbeni Yakubu ayaa hogaanka ciyaarta ku siiyey kooxdiisa Blackburn ka dib markii uu shabaqa ku hubsadey kubad gool ku laad aheyd oo ku timid markii weeraryahanka reer Bulgaria Dimitar Berbatov uu dhulka dhigay daafaca Chris Samba oo isku dayayey in uu madaxa ku hirdiyo.
Ciyaarta ayaa qaybtii hore ku idlaatey 0-1 oo ay hogaanka ku hayso kooxda martida ah ee Blackburn oo tababaraheeda Stave Kean si weyn loogu kacsan yahay oo cid kale iska daayee taageerayaashiisu diidan yihiin in uu sii hayo maamulka kooxda.
Qaybtii dambe ee ciyaarta macalin Sir Alex wuxuu ciidamadiisa soo faray amar kulul oo ahaa in ay guusha soo hoyaan oo uu caawa ku baashaalo dabaaldega 70 sano jirkiisa farxad iyo inay qaataan canaantiisa caanka uu ku yahay.
Wax u sheegii iyo canaantii wiilasha Sir Alex way kaga dartay oo markii la isku soo laabtey qaybta labaad ee kulanka oo 6 daqiiqo oo kaliya lagu jiray garoonka ayaa kubad uu la dhexmarey daafaca Man United ciyaaryahan Yakubu wuxuu si xirfadeysan u hareer mariyey goolhayaha Manchester United David De Gea iyadoo ciyaartii noqotey 0-2 oo ay Blackburn lama filaan ku noqotey.
Balse Manchester United oo aan lagu aqoon in ay haraan oo ay niyad jabaan waxay ka bixiyeen jawaab deg deg ah goolasha kooxda martida shabahooda kaga shanqarisey, waxaana daqiiqad ka dib markii goolka labaad laga dhaliyey ay soo qaadeen weerar kubad isku dhiidhiib aheyd taasi oo keentey in ugu dambeyntii kubad la soo karoosay uu madaxa la helo weeraryahanka reer Bulgaria Dimitar Berbatov oo xirfada ciyaaraha ka keenay aabihiis oo ka mid ahaa kooxda FC Pirin Blagoevgrad ee dalka Bulgaria & waliba kooxda Ruushka ka dhisan ee CKA Moscow, iyadoo hooyadiis Margarita Berbatov ay aheyd gabar qatar ku aheyd ciyaarta handball-ka.
Toban daqiiqo ka dib Berbatov wuxuu mar kale kubad isla geeskii kii hore laga soo dhiibay uu la helay lugta midig isagoo ciyaarta ka dhigay 2-2 taasi oo neef weyn ka soo fujisay taageerayaasha Man United, ciyaartoyda, & waliba macalin Sir Alex Ferguson.
Waxaa sii lixaadsadey weerarada gees kasta ay ka wadeen ciidamada Man United iyagoo doonayey in ay ku dhameystaan sanadka dhamaanaya ee 2011-ka hogaanka horyaalka balse daqiiqadii 80-aad kubad Koorno aheyd oo uu madaxa la helay Grant Hanley oo ka mid ah difaaca kooxda martida aheyd ee Blackburn uu ku hubsadey shabaqa Man United isagoo ciyaarta ka dhigay 2-3 oo ay hogaanka ku qabatey Blackburn.
Goolka uu dhaliyey Grant Hanley wuxuu ahaa kiisii ugu horeyey ee abid uu dhaliyo intii uu ciyaarayey kubada cagta, isagoo kooxda Blackburn oo uu ku soo biiray sanadkii 2010-kii u saftey 23 kulan halka qarankiisa Scotland u saftey 4 jeer oo laba ka mid ah U17 iyo U19 uu saftey.
Man United oo ay isku dhibco ahaayeen Man City oo daris yihiin waxay fileysay in hogaanka horyaalka sanadka cusub ku bilowdo qabashada hogaanka balse taasi waxay noqotey riyo maalmeed.
Berbatov (Daqiiqadihii 52-aad & 62-aad)
Yakubo (Gool ku laad daqiiqadii 16-aad)
Yakubo (Daqiiqadii 51-aad)
Hanley (Daqiiqadii 80-aad)
Garoonka lagu ciyaarayey ee Old Trafford waxaa soo xaadiray 75,146 oo qof.
Chelsea oo guuldaradii shanaad gorada loo galiyey sanadka 2011 ku sagootisay kaalinta shanaad
Kooxda Aston Villa ee ka dhisan magaalada Birmingham ayaa meesha ka saartey hamigii kooxda Chelsea ee ka dhisan galbeedka magaalada London ay ka laheyd horyaalka Premier League-ga ka dib ciyaar adag oo ka dhacdey guriga Chelsea ee Stamford Bridge taasi oo ku dhamaatey 1-3.
Tani waxay ka dhigan tahay in Chelsea aanay badin afar kulan oo is xiga oo ka mid ah Premier League-ga, iyadoo sidoo kale ka dhigan in Chelsea ay taabatey guuldaradii shanaad horyaalkan socda taasi oo sadex ka mid ah loogu geystey gurigeeda.
Guuladaran waxay cadaadis xoogan saaraysaa tababaraha da’da yar ee Chelsea Andre Villas-Boas kaasi oo la aaminsan yahay in uu xakameyn karin guusha uu gaaro oo ay ku adag tahay habka badalka ciyaartoyda, shaxda lagu soo galo garoonka iyo waliba maareynta guuldarada ama guusha.
Aston Villa waxay ka soo kabatey qaybta dambe ee ciyaarta iyadoo lagala hormarey gool rigoore ahaa oo uu dhaliyey ciyaarta oo 23 daqiiqo oo socota weeraryahanka ka soo jeeda dalka Ivory Coast Didier Drogba, balse shan daqiiqo ka dib waxaa ciyaarta ka dhigay barbarc Stephen Ireland.
Toban daqiiqo ciyaarta oo ay ka dhiman tahay waxaa laba gool oo caaqibo leh u saxiixay kooxda martida aheyd ee Aston Villa ciyaaryahanada Petrov & Bent, iyadoo natiijadii ciyaartu noqotey 1-3.
Chelsea ayaa guuldaran waxay ku riixdey kaalinta shanaad waana markii ugu horeysay oo ay ku dhameysato bisha December oo uu sanad cusub ugu dhasho kaalintaasi mudo 10 sano ah.
Drogba (Gool ku laad daqiiqadii 23-aad)
Goolasha Aston Villa
Ireland (Daqiiqadii 28-aad)
Petrov (Daqiiqadii 83-aad)
Bent (Daqiiqadii 86-aad)
Garoonka Stamford Bridge ee kooxda Chelsea waxaa soo xaadiray 41,332 oo daawadayaal ah.
Arsenal oo kaalinta shanaad xaqiiqsatey ka dib markii ay guul ka gaartey Queans Park Rangers
Ciyaaryahan Robin van Persie ayaa xaqiiqdsadey goolkiisii 35-aad ee sanadkan 2011kaasi oo siiyey sadex dhibcood oo muhiim ah kooxdiisa Arsenal oo gurigeeda Emirates Stadium ku qaabisay kooxda ay isku magaalada London ka wada dhisan yihiin ee Queans Park Rangers.
Van Persie wuxuu raadinayey laba gool oo ku galo taariikhda Premier League-ga isagoo ka sara mari lahaa Alan Shearer oo haysa rikoorka 36 gool oo la dhaliyo 12 bilood oo isku xiriirsan (Calander Year), balse wuxuu ka batey rikoorka u yaal Arsenal oo kala wareegay Thierry Henry oo 12 bilood oo xiriir ah 35 gool u dhaliyey Arsenal.
Guuldarada QPR ay kala kulantey Arsenal waxay ku riixday kaalinta 17-aad iyadoo laba dhibcood oo kaliya ay ka koreysaa heerka lagu galo Sera B-da ee looga baxo Premier League-ga.
Van Persie (daqiiqadii 60-aad)
Garoonka Arsenal ee Emirates Stadium waxaa soo xaadiray 60,067 oo qof.
Swansea oo taako adag u dhigtey Tottenham
Swansea City oo ka dhisan gobolka Wales isla markaana ah kooxdii ugu horeysay ee Wales ah ee ka qayb qaadata Horyaalka English Premier League-ga ayaa taako adag u dhigtey kooxda Tottenham ee ka dhisan Galbeedka magaalada London oo xiliyadii la soo dhaafay ku socotey jawi deganaan ah oo guulo ku lamaansan yihiin.
Inkastoo kubad abuuraha reer Holand Rafael van der Vaart uu kooxdiisa martida aheyd siiyey goolka furitaanka ciyaarya daqiiqadii 44-aad, hadana weeraryahanka Scott Sinclair ayaa meesha ka saarey rajadii Tottenham ee aheyd inay kala tagaan Liberty Stadium sadexda dhibcood ee guusha ciyaarta ka dib markii 6 daqiiqo iyadoo ay ka dhiman tahay dhamaadka ciyaarta uu kubad caaqibo leh ku taabsiiyey shabaqa Tottenham Spurs, isagoo ciyaarta ka dhigay 1-1.
Tottenham waxaa ugu dambeysay inay ku badiso guriga Swansea sanadkii 1946-dii, waxaana ay raadinaysay inay meesha ka saarto taariikhdaasi iyo inay sii xoojisato baacsiga ay ku hayso kooxaha Man United & City oo ay ku soo xigto kala horeynta kooxaha.
Tottenham 16 kulan oo ka mid ah Premier League -ga oo ay ciyaartey waxaa laga badiyey oo kaliya hal kulan, halka Swansea ay badisey hal kulan 9 ciyaarood oo ka mid ah Premier League-ga.
Sinclair (Daqiiqadii 84-aad)
Goolka Tottenham (Daqiiqadii 44-aad)
Garoonka lagu ciyaarayey ee Liberty Stadium ee kooxda Swansea waxaa soo xaadiray 20,393 oo daawadayaal ah.
Kulamada kale ee Sabtidii & Axada
Stoke City 2-2 Wigan Athletic oo isku arkay Britannia Stadium
Bolton Wonders 1-1 Wolves oo ku kulmay Reebook Stadium
Norwich 1-1 Fulham oo isku hirdiyey Carrow Road
West Bromwich 0-1 Everton waxaa la isku farasaaray garoonka The Hawthorns ee kooxda WBA.
Jimcadii Liverpool waxay 3-1 gurigeeda Anfiled ku garaacdey Newcastle oo marti u aheyd.
Gooldhalinta Horyaalka Premier League
Van Persie (Arsenal 17 gool)
Ba (Newcastle 14 gool)
Ageuro (Man City 13 gool)
Rooney (Man U 13 gool)
Yakubu (Blackburn 12 gool)
Dzeko (Man City 10 gool)
Adebayor (Tottenham 9 gool)
Sturridge (Chelsea 9 gool)
Balotelli (Man City 8 gool)
liverpool oo si cadan oo kalesoo champions legauge ama in ay qaado priemer league
c /fitaax maxamad faarax says:
SXb waan nisalaama yaa